Waxa uu soo jeediyay "Burkines iyo Burkines", siday isugu xigaan ninka iyo naagta ama ragga iyo dumarka. Waxaanu ku jawaabnay inaanan amar ka helin Paris, iyo in n ... Akhri wax dheeraad ah
Dalkii hooyo mise geeri? Waan guuleysan doonnaa - Halganka oo keliya ayaa xoreynaya: markii dadku istaago, boqortooyooyinkii ayaa gariiray. Run ahaantii, markaan arko dhalinyaro madow / Afrikaan ah oo iibinaya ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 12, 2020 12: 00 No Comments
Dhaxalka uu ka tagay Thomas Sankara: Thomas Isidore Sankara wuxuu u hibeeyay jiilalka mustaqbalka mustaqbalka xoogga iyo tamarta rajada, astaantii karaanka iyo damiirka taariikhiga ah ee difaaca ... Akhri wax dheeraad ah
Tuuladan ku taal Burkina Faso, ragga iyo yaxaasyaduba waxay ku wada noolaanayaan wada noolaansho, layaabna ma leh markii aad taqaanid taariikhdii hore ee Afrika ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Nofeembar 10, 2019 7: 00 No Comments
Afrikaanku waligood waxay ku noolaan jireen sifiican dabeecadda iyo xayawaanka, falsafadda afrika xitaa asal ahaan, maaha inay waxyeello u gaystaan ​​xayawaannada kale: waan u labisannay ... Akhri wax dheeraad ah
Burcadihii gumaysiga Afrika: boqortooyooyinkii waaweynaa ee boqortooyadii Afaraad, oo ay ku ilaalin jireen chivalry hub badan, ma lahayn wax ay kaga hinaaseen kuwa reer Yurub oo jilbahoodu ay udhowyihiin isku midnimadii Yurub.
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 24, 2018 9: 00 No Comments
Sida tusaale ahaan jilbaha Boqortooyada Moro Naba ee Burkina Faso oo wata warankooda gaduudan iyo cadaan, baalallaha gorgorka ee koofiyadaha; dharka, jaakadaha ku xiga mesh ... Akhri wax dheeraad ah
Burkina waxa ay leedahay runtii dhabta ah, laakiin DR Congo waxay leedahay cunta cunsuriyadeed: Run ama Been ah? (By, Thierry Michel: Agaasimaha Belgian) ... Reer Mucjisada dhabta ah ee DRC, ayaa?
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 17, 2018 3: 44 No Comments
Kuwa dhabta ah ee la soo weeraray ayaa la dilay, kuwa dhabta ah ee dhintay waxay u dhinteen, sunta ah, kuwa dhabta ah waa kuwa jirran, sumaynaya, kuwa dhabta ah ee la soo weeraray, Kuwa dhabta ah ayaa halis ugu jira Akhri wax dheeraad ah
Poem, waxaa qoray Maya Angelou: Waxaan wali u kacaa sharafta taariikhda madoow, xusuusnow inaad had iyo jeer kor u kacdo; waxaan kaaga mahadcelinayaa hooyo Maya Angelou markhaatigaaga iyo wasaaradaada; in ka badan 30 digrii oo sharaf leh oo laga keenay 16 kulliyado iyo jaamacado… (VIDEO)
1er May 1866: Iskudhicii Racist ee Memphis
Dunida ayaa tan ugu yeerta "LOVE"
Feb21 04: 57